Aniga waxaan ahay (wiil 16, sanno jir ah) waxaan maanta galmo la sameeyay saaxiibtayda waxaana dhaawac gaarsiiyay xubinkayga taranka. Wuu jabay waxaana maqlay cod jabitaan ah. Hadda wuu bararsanyahay midabkiisana waa buluug. Aad ayuu u xanuunayaa. Miyuu iga jabay? – Tips for refugees
Previous Previous post: Saaxiibkayga wuxuu ii sheegay oo ah (labb, 16 sanno jir ah): In labbo gabdhood oo dhigta iskuulka ay yihiin lammaane. Marka ay samaynayaan galmo: Miyay ahaanayaan kuwo bikro ah noloshooda oo dhan?
Next Next post: Walaalkayga wuxuu ii sheegay: In uu galmo la sameeyay niman. Aniga oo ah (labb, 15 sanno jir a) ma fahmayo arinkan. Ma tahay mid baashaal ah?